by Kappiya Added6years ago 2,267 Views /0Likes
စီး ပွား လွာဘ် ပွင့် By တင်တင်မြ
ကျော်ကျော်စံ. စိုးစန္ဒာထွန်း. ၀၄။ တကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ - တင်တင်မြ. တင်တင်မြ, Myanmar Song (တဝဂူ နောက်ကြောင်းပြန် - တင်တင်မြ, တေးရေး-... ဘုရားဂုဏ်တော်၊ တရားဂုဏ်တော်၊ သံဃာ့ဂုဏ်တော်. တာနောယက္ခ Courtesy of Sein Win recording. ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်. မုဉ္စလိန္ဒသတ္တာဟ (မုဉ
တွံတေးသိန်းတန် တင်တင်မြ မင်္ဂလာတေး